ओलम्पिक्सलाई पनि छायांमा पारेको मेस्सीको बार्सा बहिर्गमन – Talking Sports
जारी ओलम्पिक्स आफ्नो अन्तिम सप्ताहमा प्रवेश गर्दै गर्दा टोकियोमा शुक्रबार बिहानको प्रमुख समाचार बिश्व खेलकुदको महाकुम्भसंग लिनु दिनु थिएन ।
दुई पक्ष सम्झौतामा आउन नसकेपछि मेस्सीले बार्सिलोना छोड्न गइरहेको तर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित थियो । खेलकुदको सबैभन्दा ठूलो सुपरस्टार नै ओलम्पिक्स जस्तो ठूलो कुरालाई छायामा पार्न सक्छन् त्यो पनि ओलम्पिक्स चलिरहेकै समयमा ।
यो एउटा हलचल पैदान गर्ने ऐतिहासिक र स्तब्धपूर्ण समाचार नै थियो । मेस्सी र बार्सा पछिल्लो १७ सिजन एक अर्काको पर्याय नै बनेर रहेका थि ए । यस दौरान ६ सय ७२ गोल, ६ बालोन डि ओर पुरस्कार, ३४ प्रमुख उपाधि निक्लियो भने टोकियोमा ओलम्पिक्समा चल्दा चल्दै पनि सबैभन्दा माथिल्लो स्थान पाएको कारण तुलनै गर्न नसकिने स्तरमा ख्याती पनि ।
र यो सबै फुटबलमा निकै तनावका बीच भएको ट्रायलपछि नै सम्भव भएको थियो । सेप्टेम्बर १६, २००० मा मेस्सी र उनका बुवा होर्गे अर्जेन्टिनाको रोसारियोबाट स्पेनको बार्सिलोना पुग्दा उनी जम्मा १३ बर्षका थिए ।
यो भ्रमण आशाले भरिएको थियो तर डर र निराशा पनि उत्तिकै थियो । युवा प्रतिस्पर्धाहरुमा एक छत्र राज गर्दै आइरहेका मेस्सी फुटबलका अलौकिक प्रतिभा नै थिए । उनको भविष्य भने अनिश्चित ।
उनीमा उचाई बढाउने हर्मोनमा गडबढी भेट्टाउदा उनको सानो कदको बारेमा सबैलाई ज्ञान भएको थियो । सानो तर बलसंग देखाउने गरेको स्फुर्तिका कारणले नै उनलाई द फ्लि (उपिया) भनिन्थ्यो ।
डक्टरहरुले मेस्सी हदैसम्म चार फिट ११ इन्चसम्म ठूलो हुने आंकलन गरेका थिए ।
उचाईले खासै मतलब नराखेपनि फुटबलमा मेस्सीको जस्तो कौशलले पनि उनलाई रोक्न सक्ने थियो । सुखद समाचार उनको लागि उपचार उपलब्ध थियो । तर दुखद भने यो उपचारको लागि महिनाको १ हजार डलर खर्च गर्नु पर्ने । यो मुल्य मेस्सीको परिवारले तिर्न त सक्थेन नै अर्जेन्टिनाकै व्यवसायिक क्लबहरुले यो मुल्य तिरेर मेस्सीमाथि जुवा खेल्न चाहन्थेन ।
मेस्सीमाथिको लगानीले प्रतिफल दिने बिश्वस्त गराउने हो भने युरोपका ठूलो क्लबले भने यति पैसा खर्च गर्न सक्थ्यो । मेस्सीका बुवा युरोपका शक्तिशाली फुटबल एजेन्ट योसेप मारिया मिन्गुएलाको सम्पर्कमा आए ।
मिन्गुएलालाई त्यो समय अर्जेन्टिनामा मेस्सीले खेलेको भिडियोले मात्र अचम्ममा पारेको थिएन । मेस्सी सुन्तला र टेनिस बललाई पनि कसरी एक चोटी भुइमा नझारी सयौं पटक जगल गर्न सक्छन् भन्ने कुराले अचम्ममा पारेको थियो ।
यसअघि कहिल्यै पनि १३ बर्षियको प्रतिनीधित्व नगरेका मिन्गुएलाका लागि मेस्सीको केस भने फरक थियो । उनले स्पेनी महारथी बार्सिलोनालाई क्लबको युवा एकेडेमी ला मासियाका लागि प्रयास गर्न मनाएका थिए । ला मासिया यस्तो एकेडेमी हो जहां युवा प्रतिभा बस्छन्, खेल्छन् र पछि क्लबको मुख्य टोलीलाई प्रतिनीधित्व गर्छन् ।
यो एउटा ट्रायल थियो । र शायद ट्रायल भन्दा बढी हुन गइरहेको थियो ।
मेस्सीलाई आफ्नै उमेरका उत्कृष्ट स्पेनिस खेलाडीहरु भन्दा राम्रो रहेको प्रशिक्षकहरुलाई साबित गरेर मात्रै पुग्ने थिएन । उनी आफू भविष्यका लागि नै बिछट्टै राम्रोप्रतिभा रहेको र यसका लागि क्लब व्यवस्थापन उनको बुवालाई बार्सिलोनामा एउटा अपार्टमेन्ट, वर्क भिजा, जागिर र उनको उपचारको खर्च व्यहोर्न सक्ने सम्म राजी गर्नु पर्ने थियो ।
र यो सबै कुरा एक यस्तो १३ बर्षिय बच्चाको लागि थियो जसको उपचारले काम गर्नेछ भन्ने ग्यारेन्टी पनि थिएन । उपचारदेखि प्रदर्शनसम्म मेस्सीको लागि गलतीको कुनै ठांउ नै थिए । सबै कुरा शत प्रतिशत हुनु पर्ने थियो ।
टिममा पर्नै पर्ने बाहेक अर्को बिल्प मेस्सीलाई थिएन । हरेक हप्ता मेस्सीले औषधी नलिने हो भने उनको उचाई बढ्ने सम्भावना क्षीण हुंदै जाने थियो । अर्जेन्टिना फर्कनु उनको करिअरको समाप्ति नभएपनि यसले के असर गर्न सक्थ्यो त्यो अहिले सबैलाई थाहा भइसकेको कुरा हो । र यदि बार्साले नलिएको बच्चा भन्ने समाचार बाहिर आएको भए अरुले क्लबहरुले उनलाई लिएर जुवा खेल्ने कुरै थिएन ।
लियोनल मेस्सी बिश्वकै महान खेलाडी बन्ने नबन्ने कुरा त्यही एउटा ट्रायलमा निर्भर थियो । अहिले हुंदैन भने कहिल्यै पनि हुंदैन जस्तो । जब मैदानमा मेस्सी ट्रायलका लागि उत्रिए खेलाडीहरुले कानेखुशी गर्दै उनको खिल्ली उडाउन थाले । “यो बच्चा अर्जेन्टिनादेखि यहांसम्म आएको हो ?,” मेस्सीले सुने ।
“उनी यति सानो र यति दुब्ला थिए की हामी उनलाई खान्छौं जस्तो लागेको थियो,” ट्रायलमा संगै रहेका खेलाडी मार्क पेद्राजाले धेरै बर्षपछि यसको खुलासा गरेका थिए ।
ट्रायलमा खेल शुरु भएपछि मेस्सीले त्यही गरे जुन उनी अबको दुई दशक बार्सिलोनामा गर्न गइरहेका थिए । सबै खेलाडीहरुबीचबाट ड्रिब्लिंग गर्दै लाने र गोल गर्ने । ट्रायलमै मेस्सीले पांच गोल गरिदिए ।
“जब उनले बल छोए हामीले थाहा पायौं उनी त अद्वितीय रहेछन् भनेर । उनीबाट बल खोस्नु असम्भव नै थियो,” पेद्राजा भन्छन् ।
मैदानमा रहेका स्काउट र प्रशिक्षकहरुले आखा अगाडी देखेको कुरा पत्याइरहकै थिएनन् । “के उनी साच्चै १३ बर्षका हुन् ? के उनी यति राम्रा छन् ? के हाम्रो आंखाले धोका त दिइरहेको छैन ?” यस्तै प्रश्न उनीहरुको मनमा खेलिरहेको थियो ।
त्यसपछि क्लबका प्राविधिक निर्देशक कार्लेस रेक्साचका लागि अर्को ट्रायलको तैयारी गरियो । रोक्साच त्यो समय फुटबलका यस्ता प्रभावशाली मान्छे थिए जसले मेस्सीका लागि सबै कुरा तैयार पारिदिन सक्थे ।
ट्रायलको यो अवधारणा नै अचम्मको थियो । अरु कुनै देशका निम्न तहका फुटबलरले सबैभन्दा कडा व्यवस्थापक अगाडी खेलेर देखाउनु परेको जस्तो । रेक्साचलाई प्रशिक्षकहरुले मेस्सीको बारेमा बताएको कुरामा अविश्वास थियो । उनी ट्रायलमा घम्सा घम्सी शुरु नहुञ्जेल देखा परेनन् ।
रेक्साच अन्य स्काउट र प्रशिक्षकहरु भएतर्फ बसे । मैदानमा जब उनले खेल हेरे रेक्साचको आखा टाउकोबाट बाहिर निक्लियो । मेस्सी एक्लै रेक्साचको सिंगो एकेडेमी टिमलाई नचाइरहेका थिए । उनको जस्तो फुटवर्क, बल माथिको नियन्त्रण, गति, दिशा बदल्ने क्षमता रेक्साचले पछिल्लो एक दशकमै नदेखेको किसिमको थियो ।
मैदानको अर्को तर्फ प्रशिक्ष्ँकहरु कहां पुगुञ्जेल उनले मेस्सीको खेल केही मिनेटका लागि मात्र हेरेका थिए । तर निर्णय भने भइसकेको थियो । उनले पर्याप्त देखिसकेका थिए र प्रशिक्षकहरुका लागि एक मेसेज लिएर गए ।
अपार्टमेन्ट ? उपचार ? पैसा ? वर्क भिजा ? अर्जेन्टिनाको सानो शहरबाट आएका १३ बर्षिय बच्चका लागि लिइनु पर्ने रिस्क ? “खेल रोक,” रेक्साचले प्रशिक्षकहरुलाई भने । “यसलाई अनुबन्ध गर्दा हुन्छ ।”
फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा उत्कृष्ट ट्रायलको रुपमा लिइने गरेको यो ट्रायल पछि मेस्सीले त्यो उपचार पाए जसले गर्दा उनी पांच फिट ७ इन्चसम्म बढे । र यो ट्रायलले बार्सिलोनालाई यस्तो मेगास्टार दियो जसले २१ बर्षपछि क्लब छोड्दा खेलकुद बिश्वलाई नै रोकिदियो ।
टोकियोमा ओलम्पिक्स चलिरहेको स्थितिमा पनि ।
इंग्ल्यान्ड विरुद्ध भारत दबाबमा